प्रहरीको घरमा चोरी गर्न पसेका चोर घरधनीकी छोरीको कोठामा गएर……. — Sanchar Kendra
काठमाडौं। कहिलेकाहीँ चोरीका विभिन्न अनौठा घटनाहरु भेटिन्छन्। चोरहरुका विभिन्न अनौठा हर्कतहरु सार्वजनिक हुन्छन्। यस्ता घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चर्चा पाउँछन् ।
यस्तै विचित्र घटना पछिल्लो पटक थाइल्याण्डमा भएको छ । यहाँ एक चोर चोरी गर्नको लागि एउटा घरमा छिरे । तर, घरमा एसी चलिरहेको पाएपछि आनन्दले सुत्नको लागि लोभिए र त्यहीँ सुते ।
यो कोठा घरधनीकी छोरीको थियो । टि न्यूज सुरिनका अनुसार घटना थाइल्याण्डको सेन्ट्रल प्रान्तको हो । यहाँ २२ वर्षका एक युवक रातको २ बजे चोरी गर्ने नियतले घरमा पसे ।
तर, उनलाई निद्रा लागेपछि उनले घरको एसी अन गरे र त्यहीँ भएको बेडमा सुते । बिहान जब घरमालिक उठे उनी चकित परे । कोठामा एसी चलिरहेको थियो र त्यहाँ बेडमा एक व्यक्ति सुतिरहेका थिए ।
यो कोठा उनकी छोरीको थियो र त्यस दिन उनकी छोरी घरमा थिइनन् त्यसैले त्यो कोठा खाली थियो । मालिकले झ्यालबाट हेर्दा छोरीको कोठामा अर्कै व्यक्ति सुतिरहेको देखेपछि पुलिसलाई बोलाए । जब ती चोरलाई उठाइयो उनी आँखा मिच्दै उठे र यस्तो अभिनय गरे मानौं उनलाई केही थाहै छैन ।
रोचक कुरा त के भने जुन घरमा चोर समाथिए त्यो घर पनि पुलिसकर्मीकै थियो । रिपोर्टका अनुसार यी चोरले त्यो घरबाट केही मूल्यवान सामान चोरी गरेका थिए ।
तर, यही क्रममा निद्रा लागेपछि चोर सुतेका थिए । उनको निद्राले उनलाई समस्यामा पार्यो र उनी पक्राउ परे । पुलिसले अहिले सोधपुछ गरिरहेको छ ।
झुक्किएर मानिसहरुले श्रीमान्–श्रीमतीलाई आमा–छोरी भनेपछि….
समलिंगी जोडीहरूलाई देखेर धेरैपटक मानिसहरु छक पर्ने गरेका छन् । तर कसैले श्रीमान्–श्रीमतीलाई नै आमाछोरीजस्तो सोच्छ भने त्योभन्दा अनौठो के होला ।
यस्तै, भएको छ एक समलिंगी जोडीका सवालमा । व्हिटनी र मेगन बेकनको जोडीलाई मानिसहरु आमा–छोरीजस्तै ठान्छन् । विवाहको दिन पनि मानिसहरुले उनीहरुलाई आमा–छोरी ठानेका थिए ।
बेलायतको वर्कशायरस्थित विन्डसरमा बस्ने यो लेस्बियन जोडी सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै चर्चित छ । उनीहरुको टिकटकमा ९० हजारभन्दा धेरै फलोअर्स छन् ।
आफुलाई आमा–छोरी भनिदिँदा कस्तो महसुस हुन्छ भन्ने अनुभव समेटेर पनि उनीहरुले भिडियो पोस्ट गर्ने गरेका छन् र यस्ता पोस्टमा अहिलेसम्म १८ लाखभन्दा धेरै लाइक्स आइसकेको छ ।
मिरर युकेको रिपोर्टअनुसार यस दम्पतीले २०१७ मा क्यालिफोर्नियामा विवाह गरेको थियो । मेगनका अनुसार यतिबेला विवाहका लागि कपडा खरिद गर्दा पनि मानिसहरुले उनीहरुलाई आमा–छोरी ठानेका थिए । र, वास्तविक बुझेपछि ती मानिसहरुले माफी पनि मागे ।
व्हिटनीको उमेर ३३ वर्ष र मेगनको उमेर ३४ वर्ष भयो । मेगन बेकन पति र व्हिटनी पत्नी हुन् । तर, मेगन वास्तविक उमेरभन्दा केही पाको देखिन्छन् । त्यहीकारण मानिसहरुले उनलाई आमा ठान्ने गरेका छन् । यसबारे मेगनले भनेकी छिन्, ‘जब मानिसहरुले हामीलाई आमा–छोरी भन्छन् ।
तब मलाई निकै दुःख लाग्छ । किनकी, म आफ्नी पत्नीकी आमा बराबरको बुढो देखिन चाहन्न ।’ यद्यपि, टिकटक फलोअर्सले भने उनीहरुलाई चिनिसकेका छन् । उनीहरुले यो सुन्दर जोडीको जमेर तारिफ गर्ने गरेका छन् ।